Dawladda Maraykanka Oo Caddaysay Mawqifkeeda Aqoonsiga Qaddiyadda Madaxbanaanida Somaliland – somalilandtoday.com
Dawladda Maraykanka Oo Caddaysay Mawqifkeeda Aqoonsiga Qaddiyadda Madaxbanaanida Somaliland
(SLT-Washington)-Dawladda Maraykanka ee maamulka Madaxweyne Donald Trump ayaa cadaysay mawqifka dalkaas ee aqoonsiga qaddiyadda madaxbanaanida Somaliland.
Kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka u qaabilsan Afrika danjire Tibor Nagy, ayaa shalay ka qayb galay barnaamij su’aalo toos ah lagu weydiinayay oo ku saabsanaa siyaasadda cusub ee Maraykanka ee ku waajahan Afrika, waxaana su’aal weydiiyay Siciid Ismaaciil Ibraahim oo ah muwaadin reer Somaliland ah oo madax ka ah shabakadda Somaliland Chronicle. Su’aasha la weydiiyay danjire Tibor Nagy, ayaa ahayd “Maraykanku wuxuu ku dhawaaqay inuu Soomaaliya siinayo deeq ku dhow hal bilyan inkasta oo uu ka jiro musuq maasuq baahsan iyio nabadgelyo darro sii xumaanaysa. Dhinaca kele Somaliland waxay ahayd dal nabad iyo dimoqraadiyadi ka jirto 27 sanadood ee u dambeeyay. Muxuu Markaaynku si macne leh ugula shaqayn waayay Somailand?
(SLT-Muqdisho)-Qoraal goor dhowayd ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha muddo xilledkiisu dhammaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa lagu...